တစ်ချိန်က စိမ်းလန်းခဲ့တဲ့ ဆာဟာရသဲကန္တာရ - Thutazone
တစ်ချိန်က စိမ်းလန်းခဲ့တဲ့ ဆာဟာရသဲကန္တာရ
By ThutammPosted on January 1, 2018 January 1, 2018
မူရင်းရေးသားသူ – Eaint Myat Chel
ဆာဟာရ သဲ ကန္တာရ ဟာ ကမ္ဘာမှာ အပူနွေးဆုံး ဖြစ်ပြီး အန္တာတိက နှင့် အာတိတ် ပြီးလျှင် ကမ္ဘာမှာ တတိယ အကြီးဆုံး ကန္တာရ ဖြစ်ပါတယ်။ သိုပေမယ့် လွန်ခဲ့သော နှစ်ပေါင်း ၆၀၀၀ ကျော်က ဆာဟာရ ဒေသ ဟာ ယခုထက် ၁၀ ဆ ပို၍ မိုးရွာသွန်းခဲ့ပြီး အစိမ်းရောင် သန်းခဲ့တယ် လို့ဆိုပါတယ်။
မကြာသေးမီ က ထုတ်ဝေခဲ့တဲ့ သိပ္ပံပညာ တိုးတက်ရေး Science Advances ဂျာနယ် မှာ့ လေ့လာမှု့ဆိုင်ရာ အထောက်အထား အသစ်များ အရ လွန်ခဲ့သော နှစ်ပေါင်း ၈၀၀၀ လောက် က ဆာဟာရ ဒေသ တွင် စိုစွတ်သော ကာလ ရှိခဲ့ပြီး လူသားများ လည်း နေထိုင်ခဲ့တယ် လို့ဆိုပါတယ်။
အရီဇိုးနား တက္ကသိုလ် – University of Arizona မှ အဏ္ဏဝါနုံးမြေများ ခွဲခြားစီစစ်မှု့ ဆိုင်ရာ သုတေသီများ ဟာ လွန်ခဲ့သော နှစ်ပေါင်း ၆၀၀၀ ကျော် က ဆာဟာရ ဒေသ ရဲ့ မိုးရွာသွန်းမှု မိုးရေချိန် ပုံစံများ မှ တဆင့် စိတ်ဝင်စားဖွယ်ရာ ရလဒ်များ ကိုလည်း ထုတ်ဖော်နိုင်ခဲ့တယ်။
အဆိုပါ အရီဇိုးနား တက္ကသိုလ် က ဦးဆောင်သော အဖွဲ့သည် လွန်ခဲ့သော နှစ်ပေါင်း ၅၀၀၀ မှာ ၁၁,၀၀၀ ကြား ” အစိမ်းရောင် ဆာဟာရ ” မှာ ဖြစ်ပေါ်ခဲ့တဲ့ ရာသီဥတု ပုံစံကိုလည်း ဆက်လက် ဖော်ထုတ်ခဲ့ ပါတယ်။ ထို အချိန်က ဆဟာရ ဒေသရဲ့ မိုးရွာသွန်းမှု ဟာ ယနေ့ခေတ် မိုးရွာသွန်းမှု ထက် ၁၀ ဆမျှ ပိုမို ရွာသွန်းခဲ့ တယ်လို့ ဆိုပါတယ်။
ယခု လက်ရှိ ထိုဒေသတွင် ဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ ရာသီဥတု အခြေအနေ မှာ့နောက်ပြန် ကြည့်မည် ဆိုလျှင် လွန်ခဲ့သော နှစ်ပေါင်း ၅၀၀၀ နှင့် ၁၀,၀၀၀ ကြား အချိန်က ဆာဟာရ သဲကန္တာရ ဟာ သစ်ပင် ထူထပ်သော မြက်ခင်း လွင်ပြင်ဒေသ ဖြစ်ခဲ့ပြီး ထို မြက်ခင်း လွင်ပြင်များ တွင် အစားအစာ အတွက် သတ္တဝါများ ကို စုပေါင်း အမဲလိုက်သော လူ မျိုးနွယ်စုများ အခြချခဲ့သည် ဟု ဆိုပါတယ်။
အရီဇိုးနား တက္ကသိုလ် မှ ဂျက်စီကာ တိုင်ရ်နီ – Jessica Tierney ( Assistant Professor Of Geosciences . UA ) ကတော့ “ ဒါဟာ ယနေ့ခေတ် စွတ်စိုမှုထက် ၁၀ ဆ ရှိခဲ့တယ် ” ဟု ဆိုသည်။ ထိုအချက်ဟာ ယခုခေတ် ဆာဟာရ တွင် မိုးရွာသွန်း တဲ့ နှစ်စဉ် မိုးရေချိန် ပမာဏ ဟာ ယခင် အချိန် နှင့်စာလျှင် ၄ လက်မ ကနေ ၁ လက်မ ( ၁၀၀ မှ ၃၅ မီလီမီတာ ) သို့ ကျဆင်းသွားခဲ့ ခြင်း ဖြစ်သည်။
“အစိမ်းရောင် ဆာဟာရ” ကာလ တည်ရှိမှု့ကို ထုတ်ဖော်ခဲ့တဲ့ အခြား သုတေသန ပြုချက်တွေ ရှိခဲ့ ပေမဲ့ Tierney နှင့် အဖွဲ့ကတော့ လွန်ခဲ့တဲ နှစ်ပေါင်း ၂၅,၀၀၀ က ဖြစ်ပေါ်ခဲ့တဲ့ မိုးရေချိန် စံနှုန်းများ ကို အဓိကထား ပြီး ဆဟာရ ဒေသကို လေ့လာခဲ့ ပါတယ်။
ရှေးဟောင်းသုတေသန ဆိုင်ရာ အထောက်အထားများ ကလည်း လူသားတွေ ဟာ စိုစွတ်သော ကာလ အတွင်း ဆာဟာရ ဒေသ၌ အမြောက်အများ နေထိုင်ခဲကြတယ် ဆိုတဲ့ စိတ်ဝင်စားဖွယ်ရာ အချက်များကို ဖော်ပြခဲ့ ပါတယ် ။ ဒါပေမယ့် လွန်ခဲ့တဲ့ နှစ်ပေါင်း ၈,၀၀၀ လောက်က အစပြုပြီး လူမျိုးနွယ်စု တစ်ချို့ဟာ ဆဟာရ ဒေသကို တဖြည်းဖြည်း စွန့်ခွာသွား ခဲ့ကြ ပါတယ်။
ထိုသို့ လူမျိုးနွယ်စုများ စွန့်ခွာသွားချိန် က စလို့ ဆာဟာရ ဒေသဟာ ခြောက်သွေ့လာ ခဲ့တယ် လို့ သုတေသီ တစ်ချို့က ဆိုပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ အဲ့ဒီအချက်ဟာ သက်သေ အထောက်အထား ခိုင်မာမှု့ မရှိပါဘူး လို့ Tierney က ဆိုပါတယ်။
ဆဟာရ ဒေသရဲ့ လွန်ခဲ့သော နှစ်ပေါင်း တစ်ထာင်ကျော်ခန့် က ရွာသွန်းခဲ့သော မိုးရေချိန် မှတ်တမ်းများ ကို စုစည်းပြီး လေ့လာတွေ့ရှိချက်များ အရ ဆာဟာရ ဒေသ စတင် ခြောက်သွေ့ချိန် နှင့် လူများ စွန့်ခွာသွားချိန် ဟာ တိုက်ဆိုင် နေပါတယ်။
“ လွန်ခဲ့တဲ့ နှစ်ပေါင်း တစ်ထောင် အတွင်း ခြောက်သွေ့လာတဲ့ ကာလ မှာတော့ လူတွေဟာ ဆဟာရ ဒေသကို စွန့်ခွာစေဟန် တူပါတယ်” လို့ Tierney က ဆိုသည်။
Tierney နှင့် သူမ၏ အဖွဲ့ဟာ ဆဟာရ ကန္တရ သဲမြေများ နဲ့ ပတ်သက်ပြီး အနောက်အာဖရိက ကမ်းလွန် ပင်လယ်ပြင်ရှိ ကွဲပြားခြားနားသော နေရာ လေးခု က အဏ္ဏဝါနုံးမြေ၏ ဗဟိုချက်မှာ့ အရေးပါတဲ့ အချက်များကိုလည်း ဖော်ထုတ်နိုင်ခဲ့ ပါတယ်။
မော်ရိုကို မော်ရတီးနီးယား – Mauritania ၏ အနောက်မြောက်ဘက်ထောင့် မှ ရရှိသော အဏ္ဏဝါနုံးမြေ ၏ အချက်အလက်များ ၊ မိုးရေချိန် ပုံစံများ နှင့် ယခင် က ရှိခဲ့တဲ့ အစိမ်းရောင် ဆဟာရ ရဲ့ ဧရိယာ ၊ မိုးရေချိန် ပုံစံ အတိုင်းအတာ နှစ်ခု စလုံဟာ တူညီနေတယ်လို့ ဆိုပါတယ် ။
အကယ်၍များ ယခု ဆဟာရ ကန္တရ ရဲ့ ခြောက်သွေ့ကာလ မှာ့ တစ်ဖန် ပြန်လည်၍ စွတ်စိုလာလျှင် ဘယ်အရာတွေ ဟာ စိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းလာနိုင် မလဲ ……….
ထိုဒေသ တွင် ကျွဲ ၊ နွား တိရစ္ဆာန်များ ရဲ့ ကြီးပြင်းလာမှု့တွေဟာ များစွာ ကွဲလွဲလာ မလား။ ခြောက်သွေ့ ခဲ့သော ကာလ ဟာ ကွဲပြားခြားနားသော ယဉ်ကျေးမှု့နှစ်ခု ကို ပိုင်းခြားထားမလား …….. ။
ဒီ ရာသီဥတု ပြောင်းလဲမှု့ အခြေအနေတွင် လူသားများ ဟာ အနောက်ပိုင်း ဆာဟာရ Western Sahara တွင် အလုပ်အကိုင် နှင့် လူနေမှုပုံစံ စတဲ့ အရာတွေ ဟာ ဘယ်လို သွေဖီသွားနိုင်မလဲ ဆိုတာ …………………
တဈခြိနျက စိမျးလနျးခဲ့တဲ့ ဆာဟာရသဲကန်တာရ (unicode)
ဆာဟာရ သဲ ကန်တာရ ဟာ ကမ္ဘာမှာ အပူနှေးဆုံး ဖွဈပွီး အန်တာတိက နှငျ့ အာတိတျ ပွီးလြှငျ ကမ္ဘာမှာ တတိယ အကွီးဆုံး ကန်တာရ ဖွဈပါတယျ။ သိုပမေယျ့ လှနျခဲ့သော နှဈပေါငျး ၆၀၀၀ ကြျောက ဆာဟာရ ဒသေ ဟာ ယခုထကျ ၁၀ ဆ ပို၍ မိုးရှာသှနျးခဲ့ပွီး အစိမျးရောငျ သနျးခဲ့တယျ လို့ဆိုပါတယျ။
မကွာသေးမီ က ထုတျဝခေဲ့တဲ့ သိပ်ပံပညာ တိုးတကျရေး Science Advances ဂြာနယျ မှာ့ လလေ့ာမှု့ဆိုငျရာ အထောကျအထား အသဈမြား အရ လှနျခဲ့သော နှဈပေါငျး ၈၀၀၀ လောကျ က ဆာဟာရ ဒသေ တှငျ စိုစှတျသော ကာလ ရှိခဲ့ပွီး လူသားမြား လညျး နထေိုငျခဲ့တယျ လို့ဆိုပါတယျ။
အရီဇိုးနား တက်ကသိုလျ – University of Arizona မှ အဏ်ဏဝါနုံးမွမြေား ခှဲခွားစီစဈမှု့ ဆိုငျရာ သုတသေီမြား ဟာ လှနျခဲ့သော နှဈပေါငျး ၆၀၀၀ ကြျော က ဆာဟာရ ဒသေ ရဲ့ မိုးရှာသှနျးမှု မိုးရခြေိနျ ပုံစံမြား မှ တဆငျ့ စိတျဝငျစားဖှယျရာ ရလဒျမြား ကိုလညျး ထုတျဖျောနိုငျခဲ့တယျ။
အဆိုပါ အရီဇိုးနား တက်ကသိုလျ က ဦးဆောငျသော အဖှဲ့သညျ လှနျခဲ့သော နှဈပေါငျး ၅၀၀၀ မှာ ၁၁,၀၀၀ ကွား ” အစိမျးရောငျ ဆာဟာရ ” မှာ ဖွဈပျေါခဲ့တဲ့ ရာသီဥတု ပုံစံကိုလညျး ဆကျလကျ ဖျောထုတျခဲ့ ပါတယျ။ ထို အခြိနျက ဆဟာရ ဒသေရဲ့ မိုးရှာသှနျးမှု ဟာ ယနခေ့တျေ မိုးရှာသှနျးမှု ထကျ ၁၀ ဆမြှ ပိုမို ရှာသှနျးခဲ့ တယျလို့ ဆိုပါတယျ။
ယခု လကျရှိ ထိုဒသေတှငျ ဖွဈပျေါနတေဲ့ ရာသီဥတု အခွအေနေ မှာ့နောကျပွနျ ကွညျ့မညျ ဆိုလြှငျ လှနျခဲ့သော နှဈပေါငျး ၅၀၀၀ နှငျ့ ၁၀,၀၀၀ ကွား အခြိနျက ဆာဟာရ သဲကန်တာရ ဟာ သဈပငျ ထူထပျသော မွကျခငျး လှငျပွငျဒသေ ဖွဈခဲ့ပွီး ထို မွကျခငျး လှငျပွငျမြား တှငျ အစားအစာ အတှကျ သတ်တဝါမြား ကို စုပေါငျး အမဲလိုကျသော လူ မြိုးနှယျစုမြား အခွခခြဲ့သညျ ဟု ဆိုပါတယျ။
အရီဇိုးနား တက်ကသိုလျ မှ ဂကျြစီကာ တိုငျရျနီ – Jessica Tierney ( Assistant Professor Of Geosciences . UA ) ကတော့ “ ဒါဟာ ယနခေ့တျေ စှတျစိုမှုထကျ ၁၀ ဆ ရှိခဲ့တယျ ” ဟု ဆိုသညျ။ ထိုအခကျြဟာ ယခုခတျေ ဆာဟာရ တှငျ မိုးရှာသှနျး တဲ့ နှဈစဉျ မိုးရခြေိနျ ပမာဏ ဟာ ယခငျ အခြိနျ နှငျ့စာလြှငျ ၄ လကျမ ကနေ ၁ လကျမ ( ၁၀၀ မှ ၃၅ မီလီမီတာ ) သို့ ကဆြငျးသှားခဲ့ ခွငျး ဖွဈသညျ။
“အစိမျးရောငျ ဆာဟာရ” ကာလ တညျရှိမှု့ကို ထုတျဖျောခဲ့တဲ့ အခွား သုတသေန ပွုခကျြတှေ ရှိခဲ့ ပမေဲ့ Tierney နှငျ့ အဖှဲ့ကတော့ လှနျခဲ့တဲ နှဈပေါငျး ၂၅,၀၀၀ က ဖွဈပျေါခဲ့တဲ့ မိုးရခြေိနျ စံနှုနျးမြား ကို အဓိကထား ပွီး ဆဟာရ ဒသေကို လလေ့ာခဲ့ပါတယျ။
ရှေးဟောငျးသုတသေန ဆိုငျရာ အထောကျအထားမြား ကလညျး လူသားတှေ ဟာ စိုစှတျသော ကာလ အတှငျး ဆာဟာရ ဒသေ၌ အမွောကျအမြား နထေိုငျခဲကွတယျ ဆိုတဲ့ စိတျဝငျစားဖှယျရာ အခကျြမြားကို ဖျောပွခဲ့ပါတယျ ။ ဒါပမေယျ့ လှနျခဲ့တဲ့ နှဈပေါငျး ၈,၀၀၀ လောကျက အစပွုပွီး လူမြိုးနှယျစု တဈခြို့ဟာ ဆဟာရ ဒသေကို တဖွညျးဖွညျး စှနျ့ခှာသှား ခဲ့ကွ ပါတယျ။
ထိုသို့ လူမြိုးနှယျစုမြား စှနျ့ခှာသှားခြိနျ က စလို့ ဆာဟာရ ဒသေဟာ ခွောကျသှလေ့ာ ခဲ့တယျ လို့ သုတသေီ တဈခြို့က ဆိုပါတယျ။ ဒါပမေဲ့ အဲ့ဒီအခကျြဟာ သကျသေ အထောကျအထား ခိုငျမာမှု့ မရှိပါဘူး လို့ Tierney က ဆိုပါတယျ။
ဆဟာရ ဒသေရဲ့ လှနျခဲ့သော နှဈပေါငျး တဈထာငျကြျောခနျ့ က ရှာသှနျးခဲ့သော မိုးရခြေိနျ မှတျတမျးမြား ကို စုစညျးပွီး လလေ့ာတှရှေိ့ခကျြမြား အရ ဆာဟာရ ဒသေ စတငျ ခွောကျသှခြေိ့နျ နှငျ့ လူမြား စှနျ့ခှာသှားခြိနျ ဟာ တိုကျဆိုငျ နပေါတယျ။
“ လှနျခဲ့တဲ့ နှဈပေါငျး တဈထောငျ အတှငျး ခွောကျသှလေ့ာတဲ့ ကာလ မှာတော့ လူတှဟော ဆဟာရ ဒသေကို စှနျ့ခှာစဟေနျ တူပါတယျ” လို့ Tierney က ဆိုသညျ။
Tierney နှငျ့ သူမ၏ အဖှဲ့ဟာ ဆဟာရ ကန်တရ သဲမွမြေား နဲ့ ပတျသကျပွီး အနောကျအာဖရိက ကမျးလှနျ ပငျလယျပွငျရှိ ကှဲပွားခွားနားသော နရော လေးခု က အဏ်ဏဝါနုံးမွေ၏ ဗဟိုခကျြမှာ့ အရေးပါတဲ့ အခကျြမြားကိုလညျး ဖျောထုတျနိုငျခဲ့ ပါတယျ။
မျောရိုကို မျောရတီးနီးယား – Mauritania ၏ အနောကျမွောကျဘကျထောငျ့ မှ ရရှိသော အဏ်ဏဝါနုံးမွေ ၏ အခကျြအလကျမြား ၊ မိုးရခြေိနျ ပုံစံမြား နှငျ့ ယခငျ က ရှိခဲ့တဲ့ အစိမျးရောငျ ဆဟာရ ရဲ့ ဧရိယာ ၊ မိုးရခြေိနျ ပုံစံ အတိုငျးအတာ နှဈခု စလုံဟာ တူညီနတေယျလို့ ဆိုပါတယျ ။
အကယျ၍မြား ယခု ဆဟာရ ကန်တရ ရဲ့ ခွောကျသှကေ့ာလ မှာ့ တဈဖနျ ပွနျလညျ၍ စှတျစိုလာလြှငျ ဘယျအရာတှေ ဟာ စိတျဝငျစားဖို့ကောငျးလာနိုငျ မလဲ ……….
ထိုဒသေ တှငျ ကြှဲ ၊ နှား တိရစ်ဆာနျမြား ရဲ့ ကွီးပွငျးလာမှု့တှဟော မြားစှာ ကှဲလှဲလာ မလား။ ခွောကျသှေ့ ခဲ့သော ကာလ ဟာ ကှဲပွားခွားနားသော ယဉျကြေးမှု့နှဈခု ကို ပိုငျးခွားထားမလား …….. ။
ဒီ ရာသီဥတု ပွောငျးလဲမှု့ အခွအေနတှေငျ လူသားမြား ဟာ အနောကျပိုငျး ဆာဟာရ Western Sahara တှငျ အလုပျအကိုငျ နှငျ့ လူနမှေုပုံစံ စတဲ့ အရာတှေ ဟာ ဘယျလို သှဖေီသှားနိုငျမလဲ ဆိုတာ …………………
Posted in Amazing, Knowledge, news, PlacesTagged amazing, knowledge, news, places
Previous post ထွက်ပြေးရာမှ ပြန်လည်အဖမ်းခံရတဲ့ မြောက်ကိုရီးယား နျူပညာရှင် အဆိပ်သောက်သတ်သေ
Next post ထောက်ကြန့် ဓနသဟာယ စစ်သင်္ချိုင်း အကြောင်းသိကောင်းစရာ